नेकपाको महासचिव बन्दै विप्लव ! ओली र विप्लव मिलेर बनाए यस्तो योजना « Niatra TV
नेकपाको महासचिव बन्दै विप्लव ! ओली र विप्लव मिलेर बनाए यस्तो योजना
काठमाण्डौं,फागुन २१ । संसद विघटनको निर्णय पछि आफ्नै नेताहरु आन्दोलनमा गएका कारण एक्लिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अचानक भूमिगत विप्लब नेतृत्वको नेकपासंग वार्ता गरेका छन् । विहिवार भएको वार्तामा तीन बुँदे सहमति भएको छ । केही समय अघि सम्म निकै कठोर बनेका ओली विप्लब समुहप्रति अचानक लचक बनेका हुन् । तीन वर्ष भूमिगत भएका विप्लव शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग एउटै मञ्चमा देखिँदैछन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले विप्लवलाई महासचिव बन्ने प्रस्ताव गरेको बताइएको छ । तर विप्लवले ओलीले गरेको प्रस्तावको केही प्रतिकृया भने दिएका छैनन् । प्रधानमन्त्री ओली र विप्लवले लामो सहकार्यको योजनासहित यो सम्झौता गरेको दुवै पक्षका नेताहरुले बताएका छन्।
उनीहरुका अनुसार ओली समूह र विप्लवको पार्टीबीच एकता नै गर्ने तयारी छ। त्यसका लागि ओली विप्लवलाई महासचिव नै दिन तयार भएको बताइएको छ । कदाचित् एकता सम्भव नभए चुनावी गठबन्धन भएपनि गर्ने योजना दुवै नेताहरुले बनाएका छन्।
‘एक महिनाअगाडि ओलीबाट विप्लवलाई मपछिको नेता तपाईं नै हो, पार्टी एकता गरौँ, महासचिव बन्नुपर्‍यो भन्ने प्रस्ताव नै आएको विप्लव निकट एक नेताले बताएका छन् । ओलीको सो प्रस्तावलाई विप्लवले स्वीकार्न सक्ने बताइएको छ । प्रचण्डसंग चिढिएका विप्लवलाई अचानक ओलीले एकता गरेर प्रचण्डलाई सकेसम्म सत्ता बाहिर राख्ने रणनीति बनाएको टिप्पणी राजनीतिक वृत्तमा गरिएको छ ।
मंगलबार सरकारले विप्लवसँग वार्ता गर्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र प्रधानमन्त्री ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई सम्मिलित दुई सदस्यीय टोली बनाएको थियो। विप्लवको पार्टीले पनि प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा र उदय चलाउने रहेको वार्ता टोली बनाएको थियो। शुक्रबार विप्लव तीन वर्षे भूमिगत राजनीतिबाट खुला हुँदैछन्। ओली र विप्लवले एउटै मञ्चबाट सम्बोधन पनि गर्दैछन्।